Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Argentine Lionel Messi nwa akụkọ akụkọ ihe omuma
Akụkọ ndụ anyị nke Lionel Messi na -agwa gị akụkọ gbasara akụkọ nwata ya, ndụ nwata, ezinụlọ, nne na nna, nwunye, ụmụaka, ezigbo uru, ụzọ ndụ na ndụ onwe onye.
Na nkenke, anyị na -ewetara gị nnukwu ihe omume na njem Leo na stardom. Lifebogger na -amalite site na mmalite ya ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Iji mee ka agụụ ịgụ akwụkwọ akụkọ gị na-agụ gị agụụ, nke a bụ ebe a na-eme ka ụmụaka na-arị elu-nchịkọta zuru oke nke Lionel Messi's Bio.
Akụkọ ndụ Lionel Messi. Akụkọ banyere ndụ nwata ya ruo oge ama ama.
Ee, mụ na gị maara ndị fans jiri ya tụnyere Legendary Cristiano Ronaldo, na isiokwu kachasị amasị - Onye bu GOAT na football.
N'agbanyeghị nkwanye ugwu, anyị ghọtara na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole hụla nkọwa nke akụkọ Lionel Messi nke akụkọ ndụ. Anyị nwere ya niile esiri gị. Ugbu a, n'atụghị egwu, ka anyị bido.
Akụkọ Lionel Messi nwata:
Maka ndị na -ebido akụkọ ndụ, aha otutu - GOAT Football - ka bụ moniker kachasị amasị ya. A mụrụ Lionel Messi n'ụbọchị 24th nke June 1987 nne ya, Celia María Cuccittini, na nna, Jorge Horacio Messi, n'obodo Rosario, Argentina.
Zute nne na nna Lionel Messi. Anyị na-ahụ ya ka ọ na-ejide bọl ma nọdụ n'akụkụ nne ya. Ọzọkwa, nwanne ya nwanyị nke nta Maria Sol. Ọ na-enweta nkasi obi n'azụ papa.
Ọ bụrụ na ị maghị, Lionel Messi bụ nke atọ n'ime ụmụaka anọ amụrụ papa ya, onye njikwa ụlọ ọrụ nchara, na mama m, bụ onye rụrụ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ ndọta ihe na Argentina.
La Pulga toro na Rosario, obodo kachasị na etiti Argentina Santa Santa Fe. Ọ nọrọ afọ ndị mbụ ya na ụmụnne ya atọ.
N'ikwu okwu banyere ụdị ọbara ọbara ya, nwanne nwanne Messi bụ Rodrigo. Matias Mess bụ onye okenye ya ozugbo. N'ikpeazụ, nwanne ya nwanyị nke ọ tọrọ bụ Maria Sol Messi.
Zute ụmụnne Lionel Messi - Rodrigo Messi (n'isi aka nri), Matias Messi (n'etiti), na Maria Sol Messi (nwanne ya nwanyị naanị).
Ezigbo Ezinụlọ Lionel Messi:
Akụkọ akụkọ Barcelona sitere na ụlọ siri ike, hụrụ ezinụlọ n'anya. Site na ọnụ ego, Jorge na Celia María enweghi ụkọ na ngwụsị 1980 n'ihi oke nguzo na Argentina.
N'oge ahụ, nne na nna Lionel enweghị ike ịkwado ezinụlọ ha na-akpata ego.
Afọ ole na ole ka amụrụ Messi, mba South America nọ n'ọnụ ọnụ ndakpọ akụ na ụba. Nke a bụ n'ihi na Argentina enweghị ike ịkwụ ụgwọ ya.
Maka nke a, ịrị elu ịrị elu, iweda Peso na ọgba aghara ghọrọ ihe a na -eme n'ụbọchị.
Ezinaụlọ Lionel Messi so na ndị ọnọdụ akụ na ụba a dakwasịrị, nke mere ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ezinụlọ niile nọ n'etiti. Eziokwu bụ, Jorge na Celia María, ya na nde ndị ọzọ Argentine, gbalịsiri ike na-arụ ọrụ.
Nke mbu, Atomic Flea bụ nke European karịa nke Argentine. Nke a bụ n'ihi na nne nne ya-Antonio, Celia-Olivera, Rosa Maria, na Eusebio esiteghị na mba South America.
Javier Pastore Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
Ezigbo ezinụlọ nke Lionel Messi.
Lionel Messi sitere na Itali na Spanish sitere na nna nna ya site na nne na nna nna ya - Eusebio Messi na Rosa Maria Pérez.
Ma nne nne ma nna ochie bụ ndị kwabatara Argentina. Ha nwere mgbọrọgwụ ezinụlọ sitere na mpaghara etiti etiti Adriatic Marche nke Italy na Catalonia.
Leo nwere nanị agbụrụ Italiantali site na nne nne ya site na nne na nna ochie ya - Antonio na Celia Oliveira Cuccittini.
Lionel Messi Akụkọ Untold Biography - Akụkọ Akụkọ football:
N'ịbụ onye tolitere n'ezigbo mkpakọ, ezinụlọ hụrụ football n'anya, La Pulga zụlitere agụụ maka ịgba bọọlụ site na nwata.
N'oge ahụ, ya na ụmụnne ya ndị okenye, Rodrigo na Matías na -egwuri egwu mgbe niile. Ọbụna ụmụ nwanne nne ya, Maximiliano na Emanuel Biancucchi (onye mechara bụrụ ndị egwuregwu ịgba bọọlụ) soro ya gwuo egwu.
Onye chọtara talent nke Lionel Messi?
Onye na -eto eto dị afọ anọ mgbe nne nne ya hụrụ ihe mere kpakpando bọọlụ n'ime ya. Celia Oliveira Cuccittini chọtara ọdịnihu na -enweghị atụ na obere nwa ahụ.
Pep Guardiola Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Ọ bụ ihe na -enweghị atụ n'agbanyeghị na ụmụnne ya ndị okenye, Rodrigo na Matías, kụziiri ya ka esi agba bọọlụ.
N'oge a, naanị otu nwanyị n'ime ụwa dum maara na obere nwa nwoke a ga-aghọ Football.
N'ime onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ, Celia Oliveira Cuccittini bụ naanị ya, onye chọrọ ịhụ Messi ka ọ bụrụ onye egwuregwu bọọlụ.
Iji mezuo nke ahụ, ya onwe ya kpọọrọ nwata ahụ gaa ọzụzụ ọzụzụ bọọlụ mbụ ya na klọb bọọlụ mpaghara Grandoli. Mgbe ọ nọ ebe ahụ, Celia Oliveira Cuccittini ji okwu ndị a gwa nwa nwa ya okwu:
“Lionel,…. OTU YBỌCH BE, WILL B BE KWES BR B KWURU EGO KWES FOR IN THEWA, ”
Nnukwu nne nne Celia Oliveira bụ nnukwu ihe. Ọ bụghị nanị na o mere ka ndị mụrụ Messi zụta ya akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ mbụ ya mana ọ zụrụ onye nchịkwa nke klọb mpaghara ka ọ tinye nwa nwa ya n'òtù egwuregwu ahụ.
Messi na ezinụlọ ya bịara ikiri egwuregwu ahụ ebe otu ụmụ nwoke - ntakịrị karịa afọ ya na-egwuri egwu.
Ezinụlọ ya niile nọkwa ebe ahụ ikiri Rodrigo na Matías, bụ ndị egosipụtara na egwuregwu ahụ ma ọ bụghị Lionel.
N'egwuregwu ahụ, onye nkuzi Salvador Aparicio chọpụtara na ọ bụ onye ọkpụkpọ mkpụmkpụ. Iji mezue ndị otu ya, ọ gwara Leo Messi dị obere ka ọ bịa soro ụmụ nwoke ya buru ibu gwuo egwu. Mgbe nne na nna ya kwusiri ike, La Pulga sonyeere ya.
Oge mbụ bọọlụ bịara Lionel, ọ hapụrụ ya ka ọ gafee. Oge nke abụọ, ọ na -achịkwa ya wee malite ịgba ọsọ gafee oghere ahụ, na -agafe onye ọ bụla na -agafe n'ụzọ ya - ọbụlagodi nnukwu ụmụnne ya.
Site na oge amamịghe ahụ, ọ ghọrọ akụkụ nke ndị otu Salvador Aparicio ozugbo. Na-arụ ọrụ maka onye nkuzi mbụ ya, Lionel ghọrọ ihe enyemaka n'inyere ndị otu ya aka inweta mmeri mbụ ya. Lee, Atomic Flea na -enye aha ya nsọpụrụ mbụ.
Ansu Fati Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Naanị lelee obere ụkwụ ya - ọkachasị nke ziri ezi nwere ọnya. Eziokwu bụ, Messi agbaala bọọlụ kemgbe ọ dị afọ anọ.
Ọrụ mbu na umu nwoke ochie nke Newell:
N'ịbụ onye akọwara dị ka onye nwere ikike karịrị nke mmadụ, onye nkuzi Aparicio kwere nkwa ịkpọga Messi n'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ka ukwuu ka o wee mee akụkọ sitere na nwata obodo.
N'oge ahụ, papa Lionel, Jorge, wepụtara onwe ya ka ọ bụrụ onye nkuzi ya - n'aha niile nke inye nwa ya nlekọta anụ ụlọ.
Akụkọ nke Old Boys Lionel Messi.
Onye na -akwado Newell's Old Boys - yana ezinụlọ ya - Messi sonyeere klọb Rosario mgbe ọ dị afọ isii.
N'ụzọ dị mwute, naanị n'oge ahụ, ọ na -achọ ibi na Newell, nne nne ya Celia Oliveira Cuccittini nwụrụ. Ka anyị ghara ichefu, nke a bụ nwanyị chọpụtara talent ya.
Pingnagide Iru újú - Ọnwụ nne nne ya:
Ọ na -esiri Messi ike ịnagide ọnwụ nke onye lụsoro ọgụ iji tinye ya na football. Ọnwụ ya mere obere oge tupu ụbọchị ọmụmụ nke iri na otu ya.
Kemgbe mfu ahụ, onye Argentine ahụ malitere ime ememme ya site na -ele anya ma na -atụ aka na mbara igwe - niile na -asọpụrụ nne nne ya.
N'ime afọ isii ọ na-egwuri egwu maka Newell, o meriri ihe mgbaru ọsọ 500. N'ezie, Lionel so n'òtù ụmụ nwoke a kpọrọ “Ngwaọrụ '87.” Nke a bụ akụkụ ndị ntorobịa na-enweghị mmeri nke aha aha ya sitere n'afọ ọmụmụ ha - 1987.
Hụ obere Lionel. O nweghi ike ighota ya n'etiti igwe nke 87.
Ndị na -egwu egwu maara otu ụmụ nwoke a ka ha na -anabata igwe mmadụ mgbe niile. Ha mere aghụghọ bọọlụ n'oge ọkara nke egwuregwu otu mbụ ha.
Ruo taa, igwe nke 87 ka na -edobe otu WhatsApp ma na -elegara Lionel anya dị ka onye ndu ha.
Akụkọ Lionel Messi Ọrịa:
Mgbe nne nne ya nwụsịrị, Leo kwụsịrị itolite. N'oge ahụ, ọdịnihu nke nwatakịrị ahụ dị ka onye ọkpụkpọ egwu nwere egwu.
N'ezie, onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ ya, gụnyere ndị ọrụ nkuzi Newell, nwere nchegbu maka uto ya akwụsịla. Ha hụrụ Lionel ka ọ dị ka Dwarf ma e jiri ya tụnyere ndị otu ya nọ n'otu afọ.
Ọrịa hormone nke na-eto eto mere ka Lionel dị obere karịa di ya.
N'ịghọta nke pere mpe, ndị dọkịta mechara chọpụta na Messi na -arịa ọrịa ụkọ homonụ nke na -eto eto. Nke a bụ ihe gbochiri uto ya.
N'ezie, ọ na -esiri nna ya ike ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọgwụ ya na -aga n'ihu. N'oge ahụ, mkpuchi ahụike Jorge Messi nwere ike kpuchie naanị afọ abụọ ọgwụgwọ ọgwụgwọ homonụ, nke na -efu ihe dị ka $ 1,000 kwa ọnwa.
N'ịkwado nkwado, Newell's kwetara inye aka mana emesia gbahapụrụ nkwa ha kwere Messi dara ogbenye.
Chineke nke football tinyere aka dị ka nne na nna ya ochie (site n'aka nna ya) bụ ndị bi na Catalonia nwetara ụzọ isi nweta ọgwụgwọ ya na FC Barcelona.
Lionel Messi Biography - tozọ a ma ama Akụkọ:
N'ọchịchọ ha inweta klọb ga -enyere ya aka ịgwọ ọrịa ya, nne na nna ochie Lionel Messi - Eusebio Messi na Rosa Maria Pérez - nwere ihu ọma n'ịkwenye onye otu ama ama na njikwa FC Barcelona.
Mgbe ọ dị afọ 13, FC Barca nyere Messi ohere ka ụlọ ọrụ ahụ kpuchie ụgwọ ahụike ya.
Nke a bịara mgbe Eusebio na Rosa kọchara ha akụkọ banyere nwa nwa ha nwere ikike yiri nke a na ndị egwuregwu bọọlụ Argentine - n'oge. Diego Maradona.
Na mbu, ọ bụ onye isi otu FC FC Charly Rexach, onye mere ngwa ngwa ịbanye ya. N'ụzọ dị mwute, ndị isi oche nke Barcelona jụrụ. Gị n'oge ahụ, iwu bọọlụ ekweghị ka klọb ndị Europe banye ndị egwuregwu mba ofesi nke oge Leo.
Akụkọ banyere nkwekọrịta anụ ahụ Lionel Messi:
Na 14 Disemba 2000, Newell's Old Boys nyere Barcelona ohere iji gosipụta nkwa ha kwere Messi ma ọ bụ na ha nwere ohere tufuo ya.
N'ụbọchị ahụ jọgburu onwe ya, Carles Rexach - ka ọ na -eme ọsọ ọsọ imezu oge a kara aka - yana enweghị akwụkwọ n'aka, bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta Lionel Messi na akwa nhicha.
Akụkọ nwoke a mere site na imebi ọchịchọ klọb ịbịanye aka na Lionel Messi. Iji akwa nhicha ahụ mee nke ahụ enweghị ọnụ ahịa.
Mmalite Ndụ na Spain:
Na Febụwarị 2001, ezinụlọ Lionel Messi buliri akpa ha wee gafere Atlantic ga -eme ebe obibi ọhụrụ na Spain. Ezinụlọ ahụ dum bi n'otu ọnụ ụlọ dị nso na Camp Nou.
N'ụzọ dị mwute, Lionel Messi - n'afọ mbụ ya - ya na ndị òtù ya na FC Barca anaghị egwuri egwu n'ihi esemokwu mbufe n'etiti Newell's Old Boys na ọgbakọ Catalonia.
N'ezie, enwere ikike Leo ka ọ kpọọ egwuregwu enyi na egwuregwu Catalan. Enweghị ọtụtụ football, nwa ogbenye ahụ gbalịsiri ike ijikọta.
Iji mee ka ihe ka njọ, o nwedịrị ike idobe ya - ọ chọghị ikwu okwu ma ọlị. Lionel dara jụụ nke na ndị otu egwuregwu ya kwenyere na mbụ na ọ dara ogbi.
Icklọ na Ntugharị:
Ndị òtù ezinụlọ Lionel Messi, ma e wezụga papa ya na-anọru obere oge na Spen. Ka oge na-aga, nwata ahụ malitere ịta ahụhụ n'ihi agụụ ụlọ.
Ọrịa a bịara mgbe nne ya laghachiri na Rosario ya na Rodrigo, Matias, na María Sol. Ogbenye Leo nọrọ na Barcelona na nna ya na ndị ikwu ndị ọzọ dị anya.
Lee Lionel… na-arịọ Chineke nke football; Olee mgbe ị ga-abịa nyere m aka?
Mgbe otu afọ cherere ka ya na La Masia (ụlọ akwụkwọ ntorobịa nke Barca) gbaa bọọlụ, Messi na Febụwarị 2002 nwetara ikike idebanye aha ya na Royal Spanish Football Federation (RFEF).
Na-egwuri egwu na asọmpi ha niile, ọ metara ndị otu egwuregwu ibe ya, ndị gụnyere Cesc Fabregas na Gerard Piqué.
Youmụ nwoke atọ a bụ ezigbo ndị enyi n'oge Barca ha bidoro.
Ọgwụ Ọgwụ, Farewell to best Enyi na Olympic Mmeri:
Na -emecha ọgwụgwọ homonụ na -eto eto mgbe ọ dị afọ 14, ọ ghọrọ akụkụ dị mkpa nke Team Dream Team nke Barcelona. Nke a bụ akụkụ akpọrọ dị ka onye ntorobịa kacha ukwuu na Bar Barcaa.
N'oge ahụ Messi ka malitere igwu egwu mgbe niile, ọ natara onyinye iji sonyere Arsenal. Enyi ya - Cesc Fabregas - gara iso ndị Gunners. Gerard Piqué n’oge na-adịghị anya ọ hapụrụ Man United. Lionel jụrụ ịhapụ, kama ịhọrọ ịnọ na Barcelona.
Leo kwupụtara aha ya nye ụwa n'afọ 2005 n'oge FIFA World Youth Championship. O mechara bọọlụ ọlaedo, akpụkpọ ụkwụ ọla edo, na nrite ọla edo nke Olympic.
Akụkọ Lionel Messi - Akụkọ ịga nke ọma:
N'ịlaghachi na Barca, ọ na-enwe ọganihu ngwa ngwa site na klọb - na-ejide anya Frank Rijkaard, bụ onye mere ka ya na ndị otu klọb na-anọ. Mgbe ọzụzụ mbụ ya na ụmụ nwoke buru ibu, Ronaldinho n’oge na-adịghị anya, ọ metara Messi enyi.
Eziokwu ahụ bụ na akụkọ egwuregwu bọọlụ Brazil kpọrọ ya “obere nwanne” mere ka Lionel gbanwee n'otu egwuregwu mbụ, nke nwere ndị egwuregwu ama ama dịka. Samuel Eto'o.
Ị maara?… Lionel mere egwuregwu mbụ ya na ndị otu egwuregwu mbụ nke FC Barcelona n'oge enyi na enyi megide Nke José Mourinho Ọdụ ụgbọ mmiri.
Ihe ngosi dị egwu n'egwuregwu ahụ meriri ya ọkwa dị mma site n'aka ndị na -ede egwuregwu na ndị egwu. Kemgbe ahụ, Leo enweela ọtụtụ oge ihe ịga nke ọma, egwu nke butere ya ihe karịrị iko 34 maka Blaugrana.
Kemgbe o buliri ama, akụkọ egwuregwu bọọlụ enwetala nturu ugo nke onye ọkpụkpọ bọọlụ nke afọ - maka ndekọ ugboro isii.
N'ihi na Lionel emeela ọtụtụ ihe - mepụta ọtụtụ oge anwansi - meriri ọtụtụ trophies, gbata ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ, a na -akpọ ya ugbu a dị ka GOAT Football.
Ikwu Eziokwu, Lionel Messi dị nnọọ agaghị ekwe omume iji dochie. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu, nke akụkọ akụkọ football, ga-abụ akụkọ ihe mere eme.
Lionel Messi Lovehụnanya Akụkọ na Antonela Roccuzzo:
N'ịbụ onye sitere n'ike mmụọ nsọ nke nwata, onye Argentine nwere akụkọ dị egwu banyere ndụ mmekọrịta ya.
Laa azụ na 1990s - n'obodo nna ya bụ Rosario - Leo ghọrọ ihe a na-apụghị ikewapụ na Antonela Roccuzzo. N'akụkụ a, anyị ga-agwa gị otu ha si chọta ịhụnanya.
Ha abụọ nwere obi ụtọ na-ezute site na otu nwa nwoke, enyi nwanyị Argentine bụ Lucas Scaglia. Ọ bụ nwanne nwanne Antonela Roccuzzo.
Lucas Scaglia (ugbu a bụ ndị egwuregwu bọọlụ) bụ otu afọ na Leo. N'oge ahụ, ụmụ nwoke ahụ nwere mmasị n'ịgba egwu na Rosario Beach.
N'ime otu n'ime ụbọchị ntụrụndụ ụmụaka - kpọmkwem na 1992 - Lionel hụrụ nwunye ya n'ọdịnihu. Site n'oge ahụ, Antonela Roccuzzo na Leo kwere nkwa na ha ga -anọ - ọbụlagodi obere ka ha dị.
Anyị nwere ebe a, otu ihe akaebe mbụ na - ikekwe - ụbọchị ha abụọ zutere.
Naanị lelee nnụnụ ịhụnanya abụọ ahụ. Edeelarị ọdịnihu ha aka.
N'ụbọchị mbụ nke nzukọ a, Messi jụrụ enyi ya Lucas Scaglia "Onye bụ nke ahụ?". Ọ zara ... "Ọ bụ nwa nwanne m!" Leo mechara (mgbe ọ dị afọ itoolu) dere Antonella dị afọ asatọ akwụkwọ ozi ịhụnanya nke o ji tie mkpu sị:
"Otu ụbọchị, Mụ na gị ga-abụ enyi na nwanyị."
Enyi Antonela Roccuzzo tupu Alụ na Lionel Messi:
Ndị na -ahụ maka egwuregwu bọọlụ kwenyere na ya na Messi bụ ndị nwere obi nwata. Eziokwu bụ, nke a abụghị ikpe. Ebe dị anya mebiri mmekọrịta ha.
Ọ bụrụ na ịmaghị, nwunye Lionel Messi Antonela Roccuzzo sonyeere nwa nwoke ọzọ.
Nke a mere n'oge okpomọkụ nke agha Argentine na ọrịa kansa hormone na-eto eto na Spain. Ọ bụ oge ezinụlọ Lionel Messi hapụrụ Rosario na Spain ka ọ gwọọ ọrịa ya mgbe ọ na-egwu FC Barca.
N'oge ahụ, Leo na Antonela tisara. Nke a mere mgbe o mechara kwụsị inwe olile anya ịhụ nwoke ya. Antonela Roccuzzo gara n'ihu wee malite ịlụ nwa nwoke a ị na -ahụ ebe a.
Lee ihu ha. Could nwere ike ịgwa na nwunye Messi nwere ezigbo ịhụnanya maka enyi ya nwoke.
Afọ asaa mgbe nne na nna Leo kpọgara ya Spain, o kpebiri ịgakwuru enyi nwanyị ya echefuru echefu.
Nke bụ eziokwu bụ, mmekọrịta Messi na Antonella dị njọ naanị na 2007. N'oge ahụ, ọ hapụrụ enyi ya nwoke - nwa nwoke dara ogbenye - onye jụrụ ịkwụsị okwu ya.
Ị maara?… Enyi nwoke mbụ nke Antonella mesoro obi mgbawa ya n'ụdị ejiji nwoke dị nwayọọ. N'okwu ya nke ọ gwara otu akwụkwọ akụkọ Argentina;
“ANTONELA ROCCUZZO NA-AM DTA M, MA N’ASTBASTR LE M LE, Ọ R LEP MET MEGH ME M IHE ỌBLOR OL Ochie Enwere m obi ụtọ na ọ wụsara m maka onye ọzọ karịa Lionel MESSI… ”
La Pulga kwuchitere enyi ya nwanyị ọzọ na mgbe afọ abụọ gachara, o mere ka ịhụnanya ya pụta n'ihu ọha. Afọ atọ ka e mesịrị, ma Messi na Antonella kwetara ịghọ di na nwunye.
Na 30 June 2017, ha lụrụ n'otu ụlọ nkwari akụ dị na Rosario na ndị nne na nna na ndị ezinụlọ nke ma ndị hụrụ ha n'anya - na-agụta ndị ọbịa 260 - na-aga.
Ememme Agbamakwụkwọ Leo.
Ka m na-eke Lionel Messi's Bio, o nwere ụmụ nwoke atọ. Thiago Messi (amụrụ 2nd nke November 2012), Mateo Messi (amụrụ 15th nke Septemba 2015), na Ciro Messi (a mụrụ 10th nke March 2018).
N'ikpe ikpe site n'ihe ị na-ahụ n'okpuru, ị ga-ekweta na m na ọ bụ onye ezinụlọ na isi.
Maka ụwa, ọ bụ dike n’egwuregwu bọọlụ. Nye ezinụlọ ya, ọ bụ ụwa.
Ndụ nke ndụ Lionel Messi:
GOAT bụ onye nwere mmetụta ọsọ ọsọ nke kpọrọ mkpọtụ asị. Ọ bụ ụdị onye ji ike ịgbachi nkịtị kpọrọ ihe, ọkachasị n'ụlọ ya.
Maka nke a, Lionel na -ahọrọ ibi n'ime oke ọhịa n'ime obodo Barcelona - dị nso na etiti obodo na -arụ ọrụ. Iji merie mkpọtụ, ọ zụtara ụlọ onye agbata obi ya niile-mkpughe nke onye otu egwuregwu mbụ ya mere Ivan Rakitic.
Mata onye Argentine pụọ na Football.
Dabere na AS bọọlụ, Messi welitere ikpe megide ọdụ ụgbọ elu Barcelona-El Prat. Nke a rụpụtara ntụgharị nke ụzọ ha na-agba ọsọ ka ọ ghara igbochi ụda ụra ya na mkpọtụ sitere na ụgbọ elu.
Ewezuga ihe omume ya na pitch, Leo bụ nna na -ahụ n'anya na ezigbo di. Ọ bụ nke ndị na -ahọrọ ibi ndụ dị mma - n'ụlọ ya naanị ya na ezinụlọ ya na nkịta ya.
Dị ka anyị si mara, onye Argentine na-eji ego ya na-arụ nnukwu ụlọ na ịzụ ụgbọ ala.
Lionel Messi nwere ọtụtụ ụgbọ ala ma ama n'etiti ha bụ Audi Q7 (€ 69m), Ferrari 335 S Spider Scaglietti (€ 32m), na Maserati GranTurismo nke na-efu € 90,000.
Ndụ Lionel Messi nke ezinụlọ:
Ọbụnadị na ama ama ya, onye Argentine na -ejigide njikọ ya na obodo Rosario - ọbụlagodi na -echekwa ụda olu ha.
Lionel nọgidere na -enwe ụlọ ochie ezinụlọ ya niile, n'agbanyeghị na ha kara nká. Nke a bụ ihe akaebe nke mmalite ịdị umeala n'obi ya. N'ebe a, anyị ga -agbagha eziokwu gbasara nne na nna ya na ezinụlọ ya.
Nke a bụ ezinụlọ nke gafere otu ezinụlọ.
Banyere Nna Lionel Messi:
N'ịbụ onye a maara dị ka Jorge Horácio Messi, ọ rụrụ ọrụ dị ka onye njikwa maka ụlọ ọrụ nchara n'oge Lionel Messi bụ nwata.
Dị ka nwoke nwere ọgụgụ isi, ọ hapụrụ ọrụ ya wee malite ịkụziri nwa ya nwoke ihe - mgbe Leo dị afọ anọ. Nke a mere na klọb bọọlụ mpaghara, Grandoli.
Jorge Horácio nọnyeere nwa ya nwoke site na oke nsogbu. Ụbọchị ndị a, ọ na -eje ozi dị ka onye nnọchi anya ya, ọrụ o mejupụtala kemgbe ọtụtụ iri afọ.
Ọ bụ ụbụrụ n'azụ na -adụ nwa ya ọdụ nọrọ na Barcelona ka ewepụta esemokwu iwu. Nke a mere mgbe mmekọrịta Lionel na klọb nwere nkụda mmụọ mgbe ọ bịarutere Ronald Koeman.
Ka ọ dị ezigbo mma, Jorge Horácio ejiriwo alaeze nwa ya nwoke nwee ihe ịga nke ọma. Ọzọkwa ịmara, nna Lionel Messi bụ onye ịgba alụkwaghịm - nke pụtara na ya na nwunye ya anọghịzi Celia Cuccittini.
Banyere nne Lionel Messi:
A na-akpọkarị Celia María Cuccittini, ọ na-arụbu ọrụ dị ka onye na-ehicha nwa oge. Ụbọchị ndị a, ọ na-ejikwa ihe gbasara nwa ya nwoke na ntọala ebere Messi.
Leo na nne ya na-enwe mmekọrịta chiri anya, bụ onye ihu ya egbugbuola n'ubu aka ekpe ya.
Lionel Messi nke nne:
Celia María kpatara ọgba aghara otu oge site n'ịgagharị agbamakwụkwọ nwa ya na uwe ọcha. Nke a mere ka ọ yie nwunye nwa ya, Antonella Roccuzzo.
Dị ka omenala ndị Argentina si dị, ọ bụ ihe na -akpasu iwe nke ukwuu maka onye ọzọ na -abụghị nwanyị a na -eyi uwe ọcha n'oge ememme agbamakwụkwọ.
Agbanyeghị, ozi agafere na ihe omume ahụ na-ekpughe uwe ya kwesịrị ịbụ "ọchịchịrị". N'agbanyeghị nke ahụ, ọ na-asọpụrụ ọdịnala Argentina. Omume Celia mere ka ezinụlọ Antonella Roccuzzo na Leo ghara ịnọ n'okwu ọnụ.
Banyere Lionel Messi Nwanna - Rodrigo Messi:
Amụrụ na ụbọchị iri nke ọnwa Febụwarị 10, ọ bụ nwanne nke okenye - afọ 1980 tọrọ akụkọ Bar Barcaa.
Dị ka ndị ọzọ so n'ezinụlọ ya, Rodrigo na -agbasi mbọ ike n'ịchịkwa akụkụ ụfọdụ nke azụmahịa ọkachamara Lionel. Ọ na -ahụ maka nhazi ụbọchị Messi na mgbasa ozi ya.
Banyere nwanne nwoke Lionel Messi - Matias:
Amụrụ na 10th ụbọchị nke February 1980, ọ bụ nwanne ya nwoke nke okenye na ezinụlọ. Dị ka nne Lionel bụ Celia María, Matias na-enyere aka ijikwa ntọala nwanne ya nwoke.
N'ụzọ dị mwute, ọ nọbu na akụkọ akụkọ maka ihe ọjọọ. N'afọ 2016, Matias mere mpụ nke inwe egbe n'ụzọ iwu na-akwadoghị.
Dị ka ntaramahụhụ, ndị ọchịchị nyere ya iwu ka ọ kụziere klaasị football n'obodo ya ruo otu afọ.
Banyere nwanne nwanyị Lionel Messi - Maria Sol:
Maka ọtụtụ ndị na -amaghị, ọ bụ naanị nwanyị na nwa nke ezinụlọ. Maria Sol Messi tolitere ka ụmụnne ya ndị okenye na -emeso ya dị ka eze nwanyị.
Dị ka akụkọ si kwuo, ọ hụtụbeghị ka Lionel na -agba egwu ruo mgbe ọ kwara ozu ya na ụbọchị ọmụmụ ụbọchị iri na ise ya. Maria Sol na -elekọta ụlọ ahịa nwanne ya nwoke.
Nwanne nna Lionel Messi, nwanne nne, na ụmụ nwanne:
Nchoputa omumu omumu nke Diari Segre mere na 2011 gosiputara na o nwere nwa nwanne. Ọ bụbu onye otu ya, Bojan Krkić. Ndị ikwu ndị ọzọ nke Messi (ụmụ nwanne nne) gụnyere Emanuel Biancucchi na Maxi Biancucchi.
Ọzọkwa, nwanne nne Lionel Messi gụnyere Marcela Cuccittini Biancucchi, Gladis Messi, na Susanna Messi. Mụ nwanne ya nwoke; Augustine Messi, Morena Messi, Benjamin Messi na Thomas Messi.
Ndị nne na nna ochie Lionel Messi:
Site n'akụkụ Nna, ha gụnyere; Rosa Maria Pérez (Nne nne nna) na Eusebio Messi Nna nna.
Site n'akụkụ nne, ha bụ ndị a; (1) Antonio Cuccittini (Nne nne) na (2) Celia Oliveira Cuccittini (Nne nne nne).
Lionel Messi nne na nna ochie:
Jose Perez Sole bụ nnukwu nna nna nke nne nne ya. N'aka nke ọzọ, Aniceto Messi bụ nnukwu nna nna Lionel bụ nna Eusebio Messi (Nna nke Jorge Messi). Aniceto lụrụ Rosa Perez, onye bụ nnukwu nne nne Lionel.
Lionel Messi Eziokwu Na-adịghị Agbanwe:
N'ịchikọta ihe ncheta a, anyị ga-ekpughere gị ụfọdụ eziokwu ga-enyere gị aka ịghọta ihe osise zuru oke nke Playmaker.
Eziokwu nke 1: Rygwọ ọnwa na ụgwọ ọnwa nke abụọ:
ENBỌCH / / SALARY
Nweta ego na Argentine peso ($)
Kwa Afọ: € 25,429,200 $ 31,235,958 $ 2,585,041,013 £ 23,343,515
Ọnwa kwa: € 2,452,100 $ 3,012,037 $ 249,271,666 £ 2,452,100
Kwa Izu: € 565,000 $ 694,018 $ 57,435,868 £ 518,659
Kwa :bọchị: € 80,714 $ 99,145 $ 8,205,095 £ 74,093
Kwa elekere: € 3,363 $ 4,131 $ 341,870 £ 3,087
Nkeji nkeji: € 56 $ 69 $ 5,693 £ 51
Sekọnd: € 0.93 $ 1.15 $ 93.9 £ 0.85
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Lionel Messi's Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Ị maara?… nkezi nwa amaala Spanish na-enweta € 23,000 kwa afọ ga-arụ ọrụ maka afọ atọ na ọnwa isii iji mee ụgwọ ọnwa nke Messidona kwa ụbọchị.
Eziokwu nke 2: Ihe Lionel Messi pụtara:
Flea Atọm nwere ihe na-erughị nka aru asaa. Malite site na ubu aka ekpe ya bụ egbugbu nke nne ya Celia hụrụ n'anya.
Egbu egbugbu nke ifuru Lotus na ogwe aka ya na-akọwa nkịrịka ya na akụkọ akụ. Ọ na-agwa gị na ka okooko osisi na-eto, otu ahụ ka talent nwere ike itolite ebe ọ bụla.
Ụkwụ aka ekpe nke Messi nwere egbugbu nke nwa ya nwoke-aka Thiago, yana aha nwa mbụ na nwa ehi ya. O nwekwara nọmba 10 - nke ọ na -eyi.
Ụkwụ aka nri ya - n'elu nkwonkwo ụkwụ - nwere aha na ụbọchị ọmụmụ nke ụmụ ya nwoke atọ: Thiago, Mateo, na Ciro.
Eziokwu nke 3: Okpukpe Lionel Messi:
N’elu aka ubu bu egbugbu nke Jisos Kraist n’ekpere nke ogwu. Nke a bụ ihe ịrịba ama nke nkwenkwe okpukpe ya. Ọ na-egosi na nne na nna ya zụlitere ya dị ka Onye Kraịst na ọ na-ekpe okpukpe Kraịst.
Eziokwu nke 4: Banyere Nicknames nke Lionel Messi:
Ndị egwu malitere ịkpọ ya Messidona mgbe ihe mgbaru ọsọ ya dị egwu megide Getafe na 2007 Copa del Rey ọkara ikpeazụ. Ihe mgbaru ọsọ ahụ nwere ihe yiri nke na -abịaghị n'oge Diego Maradona meriri England na 1986 World Cup.
N'aka nke ọzọ, ndị egwu na -akpọ ya "La Pulga". Nke a bụ okwu Spanish nke a sụgharịrị ịbụ "Flea".
N'ihi na ọ dị mkpụmkpụ, ndị Fans na -ahụ ya dị ka igwu mmiri nke na -anaghị eme ihe ọ bụla karịa ịkpagbu ndị na -agbachitere ya. Ụbọchị ndị a, ọ na -ahọrọ "EGO." Nke a bụ ndebiri nke na -asụgharị dị ka Onye Kasị Ukwuu oge niile.
Ọzọkwa, n'ihi mkpụmkpụ ya, Messi nwere aha otutu - La Pulga Atómica. Nke a bụ n'ihi na o nwere ebe ndọda dị ala, nke na -eme ka ọ gbanwee ụzọ ọsọ ọsọ wee zere ọgụ sitere na mmegide.
Eziokwu nke 5: Banyere nkịta Lionel Messi:
N’afọ 2016, Antonela Roccuzzo zụtara Hulk dị ka onyinye nye di ya. Nkịta Lionel Messi bụ nke agbụrụ Bordeaux Mastif Dog - nke a maara maka ogo na ike ha. N'ime afọ atọ, Hulk toro ghọọ nnukwu anụ ụlọ, anụ ụlọ.
Lelee ogologo Hulk dị arọ (nkịta Lionel Messi) dị.
Eziokwu nke 6: Ọdịdị Lionel Messi:
Mara amara inwe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ àgwà niile, Football's GOAT abụghị nke zuru oke. N'ime oge Leo na-arụ ọrụ, mwakpo na interception nọgidere bụrụ nnukwu nchegbu ya.
Tebụl a na-achikota Eziokwu Lionel Messi.
WIKI AJ .J.
Aha zuru ezu: Lionel Andres Messi
Ụbọchị ọmụmụ: 24 June 1987
Age: 36 afọ na ọnwa 11.
Ndị nne na nna: Celia María Cuccittini (Nne) na Jorge Messi (Nna).
Ụmụnne: Rodrigo Messi (Nwanne nwoke nke okenye), Matias Messi (nwanne nwoke okenye) na Maria Sol Messi (Naanị Nwanna Nwanyị).
Nne na Nna Ochie Antonio Cuccittini (nne nna nne) na Celia Oliveira Cuccittini (nne nne nne)
Nna Nna Ochie Rosa Maria Pérez (Paternal Grandmum) na Eusebio Messi (Paternal Grandad).
Nne na nna ochie: Aniceto Messi (Nnukwu nna nna), Jose Perez Sole (Nnukwu nna nna) na Rosa Perez (Nnukwu nne nne).
Nwunye: Antonela Roccuzzo.
Ofbọchị Alụmdi na Nwunye: June 30, 2017
Childrenmụaka nwoke: Thiago Messi Roccuzzo (nwa nwoke mbụ), Mateo Messi Roccuzzo (Nwa nke abụọ) na Ciro Messi Roccuzzo (Nwa nke atọ).
Malemụaka :mụaka: Messi enweghi Nwa nwanyi (dika na 2020).
Iwu: Joseph Roccuzzo (nna iwu nna), Patricia Roccuzzo (nne iwu obodo), Paula Roccuzzo (nwanne nwaanyị iwu), Carla Roccuzzo (nwanne nwaanyị iwu).
Usmụ nwanne nne: Emanuel Biancucchi na Maxi Biancucchi.
Nwanne nna: Marcela Cuccittini Biancucchi, Gladis Messi na Susanna Messi.
Hemụ ụmụ nwoke: Augustine Messi, Morena Messi, Benjamin Messi na Thomas Messi.
Net uru: £ 309 million ($ 400m) - Afọ 2021 stats.
elu: 72 kg
Ogo na mita: Ogwe 1.7.
Ightkwụ dị elu: 5.57 ụkwụ.
Education: Las Heras (lemlọ Akwụkwọ Elemenrary). Enweghị kọleji.
Arụsị Childhoodmụaka: Pablo Aimar.
Akụkọ dị ka nke anyị abụghị nke onye ọ bụla chọrọ ịnụ ruo mgbe emechara ya.
Akụkọ ndụ Lionel Messi na -akụziri anyị na anyị ekwesịghị ịtụ ụjọ itolite nwayọ. Karịa nke ahụ, onye a gọziri nke ọma na -agọzi yana profaịlụ nke Lionel Andrés Messi Cuccitini na-ekwu ọtụtụ ihe banyere ngọzi ndị sitere n'okike.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime anyị na -ada mbà olileanya n'oge nsogbu, Lionel Messi akwụsịghị. Ọ hụghị ka ọ kwụsị ọrụ ya dị ka nhọrọ - n'oge achọpụtara ya na ọrịa homonụ na -eto eto.
Obi dị m ụtọ na ezinụlọ Lionel Messi, ọkachasị nna ya (Jorge Horácio) ghọrọ kompas na -eduzi ya.
Mgbe nne na nna ya guzoro ma soro ya lụọ ọgụ, ndị ikwu Leo gara ịchọ ya ohere na Spain.
Dị ka ndị ọsụ ụzọ football n'ime ezinụlọ, a hapụghị ụmụnne ya ndị okenye (Rodrigo na Matias). Ha bụ ndị dike egwuregwu bọọlụ mbụ ya.
N'agbanyeghị na ọ tozuru oke maka ọrụ ndị ọzọ, nwanne ya nwanyị (Maria Sol) na nne (Celia María Cuccittini) ka na -ejigide ndụ iji kwado alaeze ya.
Nke ikpeazu, nwunye ya (Antonela Roccuzzo) nyere ya Thiago, Mateo, na Ciro ịgwọ mkpụrụ obi ya. Echefula, o nyekwara ya Nkịta; nnukwu Hulk.
Daalụ maka ịnọnyere anyị ogologo oge a. Jiri nwayọ rute na ngalaba nkọwa - ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na edemede anyị ma ọ bụ gwa anyị ihe ị chere banyere Akụkọ Mgbe Ochie. Iji nweta nchịkọta nke Lionel Messi's Bio, jiri tebụl anyị Wiki.
Akụkọ nwata Leandro Paredes gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Akụkọ nwata Danilo Pereira gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Akụkọ nwata Moussa Diaby gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Nikola Milenkovic Child Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Akụkọ Na-adịghị Anya
Akụkọ nwata nke Xavi Simons gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-adịghị ekwu okwu
Akụkọ nwata Luis Enrique gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ a na-akọghị
Lionel messi bụ ụwa kacha mma ndị na-egwu egwuregwu. m bụkwa onye na-akwado lionel messi na dị ka ya n'ihi na mbụ playere bụ lionel messi. ị na-ekere oke post banyere lionel messi. ekele maka ikesa